Mbola manalokaloka ao Gabon sy Maoritania ary Madagasikara ny Frantsafrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2009 7:08 GMT
Mbola nampiharihary ny teti-panorona politika ampiharin'i La Frantsa amin'ny zanataniny teo aloha, sy mbola ananany tombotsoa politika sy toe-karena isan-karazany ny herisetra niseho vao haingana tany Gabon sy Madagasikara, sy ny fifidianana nolavin'ny maro any Maoritania. Lazaina matetika amin'ny hoe Frantsafrika (Françafrique) izy io
Noampangaina ho feno hosoka ny fifidianana tany Gabon satria nolazaina ho mpandresy tamin'ny fifidianana i Ali Bongo, ny zanakalahin'ny filoha maty vao haingana Omar Bongo. Nitarika fandoroana ny masoivohon'i Frantsa ao Port-Gentil, tanàna misy ny foiben'ny orinasan-tsolika frantsay Total ny herisetra nitranga taorian'ny fifidianana tany.
Eto Madagasikara, toa handamoka indray ny dinika notarihin'ny vondrona mpanelanelana iraisam-pirenena hamerenana ny fandriampahalemana fa henjana ny famoretana nataon'ny mpitondra tetezamita ny mpanohitra tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ny zoma lasa teo. Tao an-drenivohitra Antananarivo ohatra dia nahitana mpanao fihetsiketsehana nisintontsintona vazaha teo akaikin'ny hotel Glacier rehefa nandrava ny fihetsiketseham -panoherana ny fananganana governemanta tsy iraisan'ny ankolafin-kery rehetra misy araka izay nifanarahana tany Maputo ny hery miaramila.
Ary ny farany ao Maoritania, dia lasa ara-dalàna noho ny nanantanterahana fifidianana heverin'ny mpanohitra tany an-toerana ho feno hosoka ny fahefan'ny Jeneraly Mohamed Ould Abdel Aziz, izay nanongam-panjakana tamin'ny herintaona. Ary dia efa nanontany tena moa ny Maoritaniana hoe nahoana moa no i Frantsa no anisan'ny voalohany nanaiky (fr) ny valim-pifidianana.
Fonjan-kevitra efa eken'ny besinimaro amin'ny ankapobeny ny resaka Francafrique hany ka niteny mihitsy ny sekreteram-panjakana frantsay misahana ny fampandrosoana ny ampitan-dranomasina teo aloha Jean-Marie Bockel tamin'ny Janoary 2008 fa “te-hanasonia ny filazam-pahafatesan'ny Françafrique izy”
Efa ananan'ny maro dôsie ny fomba fiainan'ny mpitondra Afrikana monina ao Frantsa. Porofo mivandravandra iray amin'ny fanaovan'i Frantsa vavany fotsiny toy ny haron-tabebaka ny sarintanin'ny fonenan'ny Afrikana mpanao didy jadona manodidina an'i Paris navoakan'ny Rue89. Nametraka lisitry ny tatitra sy ny sary ao amin'ny flickr ho porofon'ny fisian'ny Françafrique ihany koa ny ONG cellule Francafrique.
Haingana dia haingana ohatra ny nanasongadinan'ny bolongana Malagasy sy Frantsay fa ny Ambasadera Frantsay Chataignier no diplaomaty vahiny voalohany tamin-dRajoelina ny andro manaraka ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara. Mampiseho ny fomba fiasan'ny Frantsafrika eto Madagasikara amin'ny alalan'ity lahatsary manaraka ity ny mpamaham-bolongana malagasy NJ:
Ny antony lazain'ny mpamaham-bolongana matetika nidiran'i Frantsa an-tsehatra eto Madagasikara dia ny habetsahan'ny solika azo trandrahana any amin'ny faritr'i Bemolanga. Nahazo ny 60%n'ny toerana ny Total izay heverina hitrandraka solika 180 000 barikana solika isan'andro mandritra ny 30 taona mahery. Nolazain'ny Reuters aza fa ny tahirin-tsolika ao Tsimiroro dia mahatratra hatramin'ny 1,7 miliara barika.
Manjary mivadika ho herisetra matetika izany fihetsika ataon'i Frantsa heverina ho manelingelina ny fivoaran'i Afrika izany.
Mba miezaka ny nanome soso-kevitra isorohana ny fanalàna fo amin'ny teratany frantsay ho setrin'ny Frantsafrika ny mpamaham-bolongana Malagasy Vony. Nanokatra taratasy ho an'ny mpizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara i Vony (fr):
Lazaina fa avy any amin'ny firenen'ny zon'olombelona ianareo Frantsay nefa fantatra ihany koa fa miaina aty amin'ny firenena anjakan'ny horohoro ianareo, satria manko efa tafiditra ho anisan'ny tantaranareo i Madagasikara,
Koa miangavy anareo izahay hanampy anay hamerina ny hasina mahamalagasy sy ny fahamendrehan'ny Nosy […] Miantso ny fiaraha-mientana avy aminareo noho ny fanajanareo ny demaokrasia sy ny zon'olombelona izahay Malagasy. Satria manambana aminareo ihany koa ny ho avy matroka, aza mangarika anay fa tolory tanana izahay ahafahanay manameloka izay tsy zakanareo ihany koa any amin'ny tany fiavianareo
Niresaka ny herisetra tamin'ny zoma i Tahina sy ny tsiaro ratsy niainany:
Mamakivaky ny kianjan'ny 13 mey ny fiara fitaterana nandehanako, toerana mafana, raha tsy ny mangotraka indrindra taorian'ny kianjan’ Ambohijatovo. Tsy maintsy nanontany ny saofera ihany hoe: “Handeha hatrany Analakely ve ianao?”, “Ie!”. Tsikaritrao avokoa ny zavatra hafahafa rehetra nandritra ny dia, tahaka ny fivorian'ny olona tamin'ny toerana iray, ny fifamoivoizana mampiahiahy, tsy maintsy mba mihaino ny resaky ny hafa ihany. Miantso olom-pantatra amin'ny finday amin'izay heverinao ho any afovoan-tanàna ianao manontany raha milamina ny tany ka hitantarany izay hitany. Mampahatsiaro ahy zava-dratsy avokoa izany rehetra izany. Tranga izay mety mbola hiseho indray.
Any Gabon kosa no itantaran'ny mpamaham-bolongana Malagasy Harinjaka, izay mitoetra any Libreville ny mety ho porofon'ny hosoka izay nahatonga ny fandresen'i Ali Bongo:
Amin'ny karatra hita amin'ny sary eo ambony ireo dia tena izy ny eo ankavia, raha namboamboarina kosa ny eo ankavanana. Mazava ihany ny fahasamihafana – notombohina ny eo ankavia rehefa avy nametahana sary, nefa ny eo ankavanana kosa dia tsy misy fitomboka ny sary, izay midika fa mety ho nosoloina ny sary – mba ho maro ny olona afaka hifidy amin'io karatra iray io.
Ity manaraka ity kosa dia lahatsary ahitana vehivavy Gabonezy miampanga mivantana an'i Lafrantsa ho tompon'andraikitra mivantana amin'ny fanaovana hosoka nandritra ny fifidianana hampandresy an'i Bongo (fr):
Nolavina matetika ho tsy misy tahaka ny petrakevitry ny fiokoana (théorie du complot) any amin'ny tany Tandrefana ireny rehetra ireny. Saingy manaporofo ny fisian'ny Frantsafrika mivantana eo imason'ny mpamaham-bolongana sy ny olo-tsotra Afrikana maro ny gidragidra nitranga tany Gabon, Maoritania ary Madagasikara.
Soratra miverina: Global Voices Community Blog » Global Voices Has United Us
[…] in Gabon, Madagascar, and Mauritania“, and I have noticed that the article was translated in Malagasy, and when I read the article translated in malagasy, I was very impressed by the quality of […]
23 Oktobra 2014, 10:35